Tag: utsva | Martech Zone
Chitatu, Kurume 4, 2015 Douglas Karr
Sezvo isu tichishandisa yedu yega agency kubatsira kushambadzira tekinoroji makambani, isu tinoziva zvese kunyatso kuyedza nematambudziko eiyo agency indasitiri. Sesangano rezvitoro, isu tine mukana wekuti isu tinogona kunyanya kusarudza nevatengi vedu. Kune rimwe divi, isu tinowanzo rwisana nekuti makambani emakambani haadi kuenzanisa imwe agency musanganiswa yavo yekutengesa. Takave nekunakidzwa tichitsvaga vatengi vanonetsa muindastiri yedu. Asi mune zvese
Iyi vhidhiyo kubva kuSpigit, uyo akazivisa kusangana pamwe nevatsigiri vedu paMindjet, ita zvimwe zvakakosha muvhidhiyo iyi izvo zvisingafanire kufuratirwa: Innovation = Pfungwa + Kuuraya. Pfungwa pachavo hadzina hunyanzvi, dzinofanirwa kuitirwa. Pfungwa inonyanya kuzivikanwa haisi nguva dzose iri zano rakanakisa pamhedzisiro yebhizinesi. Kazhinji, isu takatarisa makambani achirovera pasi rese nyaya yevatengi kungoona iro bhizinesi richitadza. Dzimwe nguva zvinokumbirwa nemutengi hazvikodzeri iyo